. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: April 2012
မနက်စောစော လမ်းထဲက ကလေးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ အော်ဟစ်နေသံကြောင့် သူမနိုးသွားခဲ့တယ် .. ညက အိပ်တာနောက်ကျပြီး ကိုယ်ပူချင်တာကြောင့် ဆေးကြိုသောက်ပြီး ဆေးတန်းခိုးနဲ့ သူမ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာပဲ ..
“ဟေ့ကောင်တွေ မြန်မြန်လာ မြန်မြန်လာ .. ဟိုမှာ ရေပက်ခံကား လာနေပြီ ..”
ပိတောက်ရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့နဲ့ အတူ ကလေးတွေရဲ့ ရေကစားနေသံတွေ ကျမနားထဲ တိုးဝင်လို့ လာတယ် .. သူမ ခံစား ကြည်နူးမိပါတယ် ..
ရေစိုခံမိတ်ကပ် နေလောင်ကာကွယ်တဲ့ ခရင်တွေ သူမ မှန်တင်ခုန်မှာ ပွထနေခဲ့တယ် .. သင်္ကြန်ကို မြတ်နိုးသူ သင်္ကြန်တွင်းကို ခုံမင်သူတယောက်အနေနဲ့ သင်္ကြန်အတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန်သံတွေ ဖူးပွင့်လို့ ..
မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို နေလောင်ခံ ရေစိုခံမိတ်ကပ် ခရင်တွေလိမ်းပြီး ဆံပင်ကို အကျစ် အသေးလေးတွေကို အမြှောင်းလေးတွေပေါ်အောင် ကျစ်ထားလိုက်တယ် .. တီရှပ်အဖြူပေါ်မှာ အဖေ့ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီအနီကွက် အပွကြီးကို ထပ်ဝတ်ရင်း အဖြူဘက်ပါတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ မိုးပြာရောင်အဖျော့ကို ဒီနေ့အတွက် ရွေးချယ်လိုက်တယ် .. ဦးထုပ်အဖြူရယ် နေကာမျက်မှန်ရယ် .. ဒီလောက်ဆို သူမပြင်ဆင်မှု ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီ .. မှန်ထဲက မြင်နေရတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြုံးပြီး ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့ အိမ်အောက်ထပ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ လာအကြိုကို စောင့်နေလိုက်တယ် ..
တီ .. တီ .. တီ ..
“ရေပက်ခံကား လာပြီဟေ့ ..” “ဝေးးးးး .. ”
“ရပ်ပေးလိုက် ရပ်ပေးလိုက် ကလေးတွေကို”
ဟော .. အဲဒါ သူ့အသံပေါ့ .. သူမ အိမ်ရှေ့ကိုသွား တံခါးဖွင့် ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူမကိုယ်ပေါ်ကို ရေအေးအေးတွေ ဖြတ်စီးဆင်းသွားခဲ့တယ် ..
“အိုး .. မြန်လိုက်တာ ရောက်လာတာ .. ခုပဲအသံကြားလို့ ထွက်လာတာ ..”
“ရော့ .. ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်ပါ ..” သူ့အသံက နွေးနွေးနဲ့ လက်ထဲမှာတော့ ပန်းတွေ တပွေ့တပိုက် ..
သူနဲ့ သူမက သင်္ကြန်ကို ချစ်တာချင်းတူ ရင်ခုန်တတ်တာချင်းတူညီစွာနဲ့ သင်္ကြန်မှာပဲ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ် .. သူက ပိတောက်ပန်းကိုလည်း ချစ်တတ်သေးတယ် .. သူ့ချစ်သူကိုလည်း နှစ်တိုင်း ပိတောက်ပန်းပေးပြီး ဦးဦးဖျားဖျား ရေလောင်းချင်သေးတာတဲ့လေ .. ချစ်သူသက်တမ်း ၃နှစ်မှာ မပျက်မကွက်ရခဲ့တဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ မေတ္တာရေစင်တွေ ဒီနှစ်ဟာ ၄နှစ်မြောက်ပေါ့ .. ၅နှစ်မြောက် သင်္ကြန်ကစလို့ နောက်နှစ်တွေတိုင်းမှာတော့ သူက သူမကို ပိတောက်ပန်းရနံ့တွေနဲ့ နိုးထစေမယ်တဲ့လေ .. သူမ ဘယ်လောက်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပါလဲ ..
နှစ်စဉ်တိုင်းလိုပဲ သင်္ကြန်ဟာ သက်ဝင်လာခဲ့ပြီ .. အရွယ်မျိုးစုံ အရောင်အသွေးမျိုးစုံ .. သူမတို့ သင်္ကြန်ကားလေးလည်း တရွေ့ရွေ့နဲ့ အင်းယားလမ်းပေါ်ကို ရောက်လို့လာခဲ့ပြီ ..
“သဲ .. ဖိုးဇော်တို့ မဏ္ဍပ်ရောက်ရင် ကိုယ်တို့နေခဲ့မလား ..”
“မနေတော့ပါဘူး .. သူတို့က ပြဿနာက ခပ်များများရယ် ..”
“အိုကေဗျာ .. မီးသတ်ပိုက်လာပြီဟေ့ ..”
ပြောလည်းပြော သူ့အင်္ကျီနဲ့ သူမမျက်နှာကိုကွယ်ထားပြီး သူမကတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ လုံခြုံလို့ .. ကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်ပါသေးတယ် .. သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ..
နေတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာသလို ထမင်းစားချိန်လည်း နီးလာလို့ တချို့မဏ္ဍပ်တွေလည်း နားကုန်ကြပြီ ..
“ကိုထက် .. ဖိုးဇော်က သူတို့ မဏ္ဍပ်မှာ ထမင်းလာစားဖို့ ခေါ်ထားတယ် .. အဲကိုပဲသွားလိုက်မလား ထမင်းစားချိန်လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ..”
သူ့ သူငယ်ချင်း ထွန်းထွန်းအမေးကို ချက်ချင်းမဖြေပဲ သူမဘက်ကြည့်ရင်း ဘယ်လိုလဲ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မေးထိုးပြတယ် .. ဒီတော့ သူမကလည်း ခေါင်းညိမ့်ပြရုံသာ ..
ဖိုးဇော်တို့ မဏ္ဍပ်ရောက်တော့ ထမင်းထုပ်ကိုယ်စီနဲ့ အနားယူနေကြတာကိုတွေ့တယ် .. သူမတို့ ကားပေါ်က သူငယ်ချင်းအဖွဲ့အတွက်လည်း ဒံပေါက်တယောက်တထုပ်နဲ့ .. ဒီလိုနဲ့ သူတို့အားလုံး ရေစိမ်ဒံပေါက်နဲ့ နေ့လည်စာ ပြီးလိုက်ကြတယ် .. သူတို့ သူငယ်ချင်းတစု နားနေတုန်း ..
“ကိုထက် ကိုထက် .. လာပါဦး .. ဟိုမှာ ငဇော် ပြဿနာတက်နေတယ် ..”
သူငယ်ချင်းတိုင်းရဲ့ ပြဿနာတိုင်းမှာ ၀င်ကူတတ်လွန်းတဲ့ သူ့ကို စိုးရိမ်တကြီးကြည့်မိတော့ ခပ်သာသာပဲ ပြုံးပြပြန်တယ် .. သူ့ သူငယ်ချင်းဘက်လှည့်ပြီး ..
“ဟိုဘက်မဏ္ဍပ်က ငနဲတွေကွာ .. ငါတို့ဘက်က အလန်းလေးတွေကို လာကြောင်ပြီး ရိသဲ့သဲ့လုပ် .. သူတို့ကြည်နေတုန်းတော့ မသိရဘူး .. ခုပြဿနာတက်မှ .. ပြီးတော့ အားလုံး ကလည်း သွေးရဲနေတယ်လေ .. တထစ်ရှိ ဖဲ့ချင် ချချင်နေတဲ့အချိန် .. လာပါကွာ .. မင်းကူမှဖြစ်မှာ ..”
“အေးပါကွာ .. ငါလိုက်ခဲ့မယ် .. တကယ့်ပြဿနာကောင်တွေ ..” ပြောလည်းပြော ထဖို့ပြင်ရင်း ..
“သဲ စိတ်မပူနဲ့နော် .. ကို ခဏလိုက်သွားမယ် .. ဒီမှာပဲစောင့်နေ ..”
“သဲ လိုက်မယ် ..”
“အာ .. မလိုက်ပါနဲ့ .. ဟိုက အကုန်မူးရူးနေတာ .. ကိုယ်ကသွားထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောဆိုရမှာလေ ..”
“မူးရူးနေတဲ့လူတွေနဲ့မို့ စိတ်ပူတာလေ ..”
“သြော် .. ကို တယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲ .. တခြားဘေးနားမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေရှိတာပဲ .. ပြေပြေ လည်လည် ဖြေရှင်းလိုက်ရင် ပြီးသွားမှာပါ .. စိတ်မပူနဲ့ .. သဲပါမှ သဲကို ပြန်ပူနေရဦးမယ် .. လိမ္မာတယ် .. ဒီကနေပဲ စောင့် .. ဆွေဆွေတို့လည်း ရှိနေတာပဲဟာ .. နော် ..”
“ဂရုစိုက်နော် .. မြန်မြန်ပြန်လာ ..”
“အင်းပါ ..” သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ခပ်အေးအေး ခပ်ပြုံးပြုံးသာ ..
ပြဿနာဖြစ်နေရာကို လှမ်းကြည့်မိတော့ တော်တော်လေးရေချိန်ကိုက်နေပုံရတဲ့ ကောင်လေး ၁ယောက်နဲ့ ကောင်မလေး၁ယောက် ပြီးတော့ ဖိုးဇော် .. ကြည့်ရတာတော့ သုံးပွင့်ဆိုင်ပုံစံ .. ကိုထက်တို့ အနား ရောက်သွားချိန် ပြောနေ ဆိုနေရင်း တွန်းလား ထိုးလားဖြစ် လာပြီး ကောင်မလေး က ကောင်လေး ကို လှမ်းရိုက်လိုက်တာ မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ပွဲက ပိုကြမ်းသွားပြီ .. ဟိုဘက် မဏ္ဍပ်က လုံခြုံရေးတွေပါ ရောက်လာပြီး ၀ိုင်းဆွဲတာ မြင်လိုက်ရသည် .. ဒီလိုနဲ့ ပွဲကပြီးသွားပြီး လူတွေလည်း ရှဲသွားခဲ့ပြီ ..
“ဟူး .. တော်ပါသေးရဲ့ ..” တခါတလေတော့လည်း စဉ်းစားမိသည် .. သင်္ကြန်ဆိုတာ ဟိုးအရင်နှစ်များစွာတည်းက လွတ်လပ်စွာ ပျော်ပါးခွင့် ရှိသည်မှန်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် လွတ်လပ်စွာ ရမ်းကားခွင့်ပါ ရှိနေကြပြီလား .. သူမ နားမလည်နိုင်ပါ .. သို့သော် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြင်တွေ့ ကြားသိနေရသော မြင်ကွင်းများ သတင်းများက သက်သေခံနေခဲ့သည် .. သူမတို့ ချစ်သော သင်္ကြန်သည် ငြိမ်းအေးခြင်း ကင်း၍ ပူလောင်ညစ်ထေးလာနေသည် ..
သူမအတွေး မဆုံးခင် ..
“သဲ .. လာ သွားကြမယ် ကားဆီကို .. ဖိုးဇော်ပါ ခေါ်လာခဲ့တယ် .. ဒီကောင် မဏ္ဍပ်ထဲ ထပ်ရှိနေရင် ထပ်ငြိနေမှာစိုးလို့ ..”
သူကမ်းပေးတဲ့လက်ကို အသာဆွဲထူထရင်း စိတ်ကတော့ သိပ်မကြည်ချင် .. ဖိုးဇော်ဆိုတာ ပြဿနာ အလွန်ရှာတတ်သောသူ .. မမူးပဲတောင် တထစ်ရှိ စိတ်တိုပြီး ရန်လိုနေသော သူ .. ခုချိန် ရေချိန်မှန်နေတာနဲ့တော့ .. သူမ သက်ပြင်းပူတွေသာ မှုတ်ထုတ်ရင်း ..
မဏ္ဍပ်တွေ ရေစပက်နေပြီ .. သူမတို့ကားလေးလည်း နားနေရာက တရွေ့ရွေ့ထွက်လာရင်း ..
“ဟာ .. ဘယ်လိုကောင်တွေလဲကွာ .. ဒီလောက်လမ်းရှုပ်နေတာကို အတင်း လမ်းလာတောင်း နေသေးတယ် .. လုံးဝဖယ်မပေးနဲ့ ..”
တီ .. တီ .. တီ .. တီ .. တီ .. တီ ..
ဟွန်းဆက်တိုက်တီးရင်း သူမတို့ ကားဘေးက အတင်းကပ်ကျော်တက်လာတဲ့ကား ..
“ဟာ ငြိပြီ .. !@#$%^&*(!@#$%^&*”
ဟိုဘက်ကားပေါ်ကို ကြည့်တော့ ခုနက ငြိထားတဲ့ ကောင်လေး .. တားဆီးဖို့ မမှီလိုက်ခင် လမ်းမပေါ်ရောက်သွားတာက ဖိုးဇော် .. ဟိုဘက်ကားပေါ်က တစီးလုံးယောင်္ကျားလေးတွေ တုတ်တွေကိုင်ပြီး ဆင်းလာတာမြင်ရချိန် သူမ မျက်လုံးတွေ ပြာတက်သွားခဲ့သည် .. ဒီအချိန်မှာပဲ သူမတို့ ကားပေါ်က ယောင်္ကျားလေးတွေလည်း ဆင်းသွားကုန်ပြီး ဖြေရှင်းတဲ့လူက ရှင်း ဖြန်ဖြေတဲ့ လူက ဖြန်ဖြေနေစဉ် ခဏတွင်းမှာပဲ ..
အသံနဲ့ အတူ သွေးတွေ ဖြာခနဲ .. ဆက်တိုက် ရိုက်သံ နှက်သံ အော်သံ ဆဲသံ .. ဖိုးဇော် လမ်းမပေါ် ခွေခနဲ လဲသွားပြီး နောက်ထပ် လဲကျသွားသူက သူ .. ရေတွေဟာ သွေးတွေနဲ့ ရောပြီး စီးဆင်းသွားတော့တယ် .. သူမ ပြေးဆင်းသွားပြီး လဲကျနေတဲ့ သူ့အပေါ် အုပ်မိုးလိုက်ချိန် ..
အသံနဲ့ အတူ သူမ ကမ္ဘာ မှောင်အတိ ဖုံးလွှမ်းသွားတော့တယ် ..
သတိရလာတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းက တဆစ်ဆစ် .. မျက်လုံးကို အားယူဖွင့်လိုက်တော့ အနားမှာ စိုးရိမ်ကြီးစွာ စောင့်နေတဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေ .. မေမေ့ မျက်ဝန်းတွေက ငိုထားတာ သိသာနေတယ် ..
“သမီးလေး .. သတိရပြီလား .. ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ် .. မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း ..”
“မေမေ .. ကိုထက် ကိုထက်ရော .. ဖိုးဇော်ရော ..”
ဖေဖေက မျက်နှာလွှဲသွားခဲ့တယ် .. မေမေ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ကြည်တွေ ပြည့်လာပြီး ..
“သမီး စိတ်အေးအေးထားနော် .. သား ကိုထက် ဓါးထိုးခံရလို့ ခု အော်ပရေးရှင်းခန်းထဲက ထွက်မလာသေးဘူး သမီး .. ဖိုးဇော်ကတော့ မနေ့ညကပဲ ဆုံးသွားရှာတယ် ..”
သူမ မျက်ဝန်းတွေ မျက်ရည်ကြည်တွေနဲ့ မှုန်ဝါးသွားခဲ့တယ် ..
စိတ်ကူးနဲ့ အတိတ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေက ခွာလို့ သူမ ၀န်းတွေကို စုံမှိတ်လိုက်တယ် .. တချိန်တည်းမှာပဲ မျက်ရည်တပေါက် လိမ့်ဆင်းသွားတယ် ..
ရနံ့တခု သူမအာရုံထဲ တိုးဝင်လာခဲ့တယ် .. ပိတောက် .. သူနဲ့ သူမတို့ရဲ့ ရင်ထဲက သစ္စာပန်း ..
မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတော့ .. နဂိုအပြုံးခံနဲ့ သူ့မျက်နှာ .. နွေးထွေးကြည်စင်လျှက် ..
“သဲ နိုးပြီလား .. ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်အခါပါ ..” ပြောရင်း ပန်းတပွေ့တပိုက်ကို ကမ်းပေးတယ် ..
“ဆွေဆွေတို့ သင်္ကြန်လည်မယ်တဲ့ .. ညက ဖုန်းဆက်သေးတယ် .. သဲ လိုက်ချင်လား ..”
“ဟင့်အင်း .. မသွားဘူး .. သဲ သင်္ကြန်ကို ကြောက်နေတယ် .. အရင်နှစ်ကလို အဖြစ်မျိုး မြင်ကွင်းမျိုး ထပ်မြင်ရရင် ရူးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ် .. ကို့ကို ဆုံးရှုံးရတော့မလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ခံစားချက်မျိုး ထပ်အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူး .. သင်္ကြန်ကို ဝေးဝေးကပဲ ချစ်တော့မယ် ..” ပြောရင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်မိတယ် .. သူကလည်း တပြန် တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ဖက်ရင်း ..
“အေးကွာ .. လှပတဲ့ သင်္ကြန်ဟာ တချို့တွေကြောင့် ရိုင်းစိုင်းအကျည်းတန်နေတယ် .. ကို တို့ သင်္ကြန်ကို ခပ်ခွာခွာကပဲ ချစ်ကြမယ် .. ကဲ ရေမိုးချိုး .. ပြီးရင် မှန်အလုံပိတ်ပြီး မြို့တပတ် သင်္ကြန်မြင်ကွင်းတွေ လိုက်ကြည့်စို့ ..”
“အင်း .. ကိုကလည်းနော် မချစ်ပဲလဲ မနေနိုင်ဘူး ..” သူမ ခပ်သောသောလေး ပြောမိတော့ ..
“ချစ်တာတော့ ချစ်တယ် .. မြင်နေရရုံနဲ့ ကျေနပ်တယ်လေ .. ဟဲဟဲ .. ကိုယ့်ဗိုက် နောက်ထပ်အပေါက် တပေါက်တိုးမှာလည်း ကြောက်တယ် .. ဟားဟား ..”
သူနဲ့ သူမ သင်္ကြန်ကို ချစ်တတ် မြတ်နိုးတတ်တာခြင်း တူညီတယ် ..
သင်္ကြန်ကာလတွင်း သေရည်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ ရန်ပွဲတွေကို ကြောက်ရွံ့တာခြင်း တူညီတယ် ..
သူနဲ့ သူမ သင်္ကြန်ကို မချစ်ပဲ မနေနိုင်တာချင်းလည်း တူညီတယ် ..
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေဟာလည်းပဲ တူညီစွာ တည်ရှိနေတယ် ..
ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်အခါပါ ..း)
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/15/2012 01:33:00 AM7comments: